Ukhala ngenkampani eyakha izindlu owase-Sweetwaters | News24
Ukhala ngenkampani eyakha izindlu owase-Sweetwaters
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaUNkk Nokzola Madolwane okhala ngenkampani eyakha izindlu embe umgodi emzini wakhe yaqede yawushiya kanjalo.
“NGIFUNA baqhubeke bangakhele umxhaso noma babuye bazovala lo mgodi abawumbe la bese belungisa indlela engena kwami le abayimoshile.”
Lawa ngamazwi kaNkk Nokzola Madolwane (35) waseMkangala e-Sweetwaters okhala ngenkampani eyakha izindlu i-VDA kule ndawo othe bafike emzini wakhe bamba umgodi omkhulu baqede bashiya kanjalo bese bemutshela ukuthi indawo abambe kuyona ayiphasanga ukuthi kwakhiwe indlu kuyo.
Elandisa i-Echo uNkk Madolwane uthe le nkampani yafika emzini wakhe ngenyanga ka-Ncwaba (October) ngonyaka owedlule bamba umgodi omkhulu bashiya kanjalo.
Uthe uma ebabuza ukuthi kungani befike bamba baqede bashiya kanjalo, bamutshela ukuthi indawo ayizange iphase ukuthi kungakhiwa kuyona indlu yomxhaso.
Uthe: “Babengakuboni ngani konke lokho ukuthi indawo ayiphasanga ngaphambi kokuba bambe njengoba sebengimoshele kangaka la kwami?
“Bawisa ucingo lwami engangibiye ngalo umuzi wasala ukhamisile awunalo ngisho isango.
“Indlela yokungena kwami yavaleka nendlu yami yodaka enamagumbi amabili isilengele kulo mgodi abawumba.
“Lendlu yodaka izowa uma kufika izimvula ezinkulu .
“Angazi bathi angenze njani ngempela njengoba bemoshe kanje.
“Ngihlala nabantu abathathu abanesifo sokudlikiza kanye nezingane ezincane, encane kunazo zonke ineminyaka emithathu. Kuzokwenzekani uma kungukuthi bavukwa ukugula bese bewela kulo mgodi noma izingane zithi ziyadlala bese ziwele kuwona?
“Sebephendule umuzi wami waba yingozi ngendlela eyisimanga.
“Sesize saphoqeleka ukuba siphinde sizivulele thina indlela encane kodwa nayo iyingozi iyashibilika kangangokuba sekuze kwaphuka umuntu ethi uhamba kuyona. Nami sekukaningi ngiwa kuyona ngoba yimbi iyashibilika.
“Kuyimanje idolo lami livuvukele linomaka ngiwe khona kule ndlela,” kubeka yena.
UNkk Madolwane uthi akafuni okuningi kule nkampani ufuna ukuthi iqhubeke nokwakha umxhaso uma kungukuthi bayahluleka ukwenza kulokho kumele babuyisele umuzi wakhe ngendlela obungayo bavale umgodi abawumbile.
“Uma behluleka kumele belungise lento abayenze la ngiqhubeke ngizizamele mina ukwakha indlu esezingeni ngoba vele bafike ngizizamela.
“Ngikhathele ukulokhu ngilandelana nabo ngibafonela ngimosha ne-airtime yami ekubeni ngingalutholi usizo.
“Sebengitshela ukuthi bazongilethela unjiniyela okunguyena othe indawo ayikulungele ukuthi kungakhiwa kuyona indlu.
“Ngihlanganaphi mina manje nonjiniyela ngoba into engiyifunayo ukuthi balungise lento,” kusho uNkk Madolwane obevutha bhe intikuthelo.
Imizamo yokuthola le nkampani yonke ibhuntshile njengoba omunye wabo ongathandanga ukuzidalula igama ethe abavumelekile ukukhuluma nabezindaba.